Monday August 19, 2019 - 14:04:31 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, halkaasoo ay ka socdaan dadaalo la doonayo in dib loogu dhiso Maamulka Galmudug.
C/raxmaan C/shakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug ayaa la kulmay Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, waxaana ay ka wada hadleen sidii loo dhisi lahaa Galmudug loo dhan yahay oo aan cidna laga tegin, cidna laga tashan.
Madaxa Xukuumadda dowlad Goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa Xafiiskiisa Magaalada Dhuusamareeb kusoo dhaweeyay Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Sheekh Maxamed Shaakir ayaa C/raxmaan C/Shakuur uga mahadceliyay Booqashii uu ku yimid deegaanada Galmudug,waxaana intaasi kadib dhexmaray kulan gaar ah.
C/raxmaan C/shakuur ayaa maalmihii u dambeeyay safaro ku marayay deegaano ka tirsan Mudug iyo Galgaduud, isagoo tagay magaalooyinka Hobyo, Gaalkacyo, Cadaado iyo deegaano kale.
Hoggaamiyahan mucaaradka ku ah Xukuumadda Federaalka ayaa u muuqda mid markaan taageersan dadaalada dib loogu dhisayo Galmudug loo dhan yahay, taasoo uu hormuud ka yahay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Dowladda Federaalka ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday dadaalo ku aadan dhismaha ay u dhan yihiin dadka reer Galmudug, kaddib markii uu waqtigiisa dhamaaday maamulkii hore oo afartii sano ee uu jiray hareeyay khilaaf iyo kala qeybsanaan.